XOG:- Maxaadan ogeyn oo berri ka dhici doonna magaalada Garoowe ee maamulka Puntland (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Maxaadan ogeyn oo berri ka dhici doonna magaalada Garoowe ee maamulka Puntland (SAWIRO)
Wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa sheegaya in halkaasi uu ka socdo dhaq-dhaqaaqyo loogu diyaar garoobayo magacaabida xubnaha Aqalka Sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya u matalaya Puntland.
Waxaa 24-ka saac ee nagu soo wajahan la filayaa in madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas uu ku dhawaaqo musharixiinta Aqalka Sare, kadibna musharixiintaasi loo gudbiyo baarlamaanka Puntland si ay u kala reebaan.
Madaxweyne C/weli Gaas ayaa maalmihii ugu dambeysay ku mashquulsanaa kulan la-tashi ah uu la yeelanayay mas’uuliyiinta maamulkaasi oo ay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenka Puntland, guddoomiyaha baarlamaanka iyo qaar ka mid ah golaha xukuumadda.
Madaxweyne Gaas ayaa sidoo kale kulan la yeeshay isimadda iyo odoy dhaqameedyadda Puntland, kuwaas oo dhamaantood uu kala hadlayay soo xulitaanka xubnaha Aqalka Sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya u matalaya Puntland.
Warar hoose ay heshay warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegaya in madaxweyne Gaas uu soo xulay liis ka kooban ilaa 33 xubnood oo u tartamaya Aqalka Sare, wuxuuna beel kasta oo hal kursi la siiyey uu kasoo xuli doonnaa ilaa seddax musharax.
Liiska musharxiintaasi ayaa la filayaa in maalinta berri ah oo ay taariikhda ku beegan tahay 5-ta bishaan Oktoober loo gudbiyo baarlamaanka maamulka Puntland, sida uu dhigaayo jadwalka doorashooyinka dadban uu guddiga soo saaray 26-ka bishii lasoo dhaafay ee September 2016-ka.